James Swan oo Golaha Ammaanka uga warbixiyay Xaalada dalka Soomaaliya | Jowhar Somali news Leader
Home News James Swan oo Golaha Ammaanka uga warbixiyay Xaalada dalka Soomaaliya
Wakiilka Qaramada Midoobay Arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa qudbad uu u jeediyay fadhiga Golaha Ammaanka waxa u ka warbixiyay Xaaladda Guud ee dalka Soomaaliya
Swan ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso xaalado adag sida Deyn Cafinta, doorashooyinka, ciidamada AMISOM oo ka baxaya dalka iyo arrimo kale.
Khubad ujeediyay Danjire James Swan, waxa uu ku dul istaagay dadaalka Dowladda Federaalka ay gelisay Hannaanka Doorashooyinka, isla markaana Qaramada Midoobay ay garab istaag u muujiyo.
“Sanadka 2020 wuxuu leedahay awood ay u noqon karto sanad isbedel ku keena Soomaaliya. Dhowr arrimood oo muhiim ah oo qaran ah ayaa la soo gabagabeeyey waxayna saameyn ku yeelan doonaan himilada Soomaaliya sannadaha soo socda ayuu yiri Danjire James Swan.
Ambassado Swan ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo la-hawlgalayaasheeda caalamiga ah ay ku heshiiyeen ahmiyadaha ugu waaweyn ee ah in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020 doorasho loo dhan yahay oo qof iyo Cod ah.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha Galmudug iyo Jubbaland waxana uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadal lagu xaliyo khilaafka ka dhex jira labadaas maamul.
Danjire Swan ayaa sheegay in ciidamada ay dowlada federalka geysay gobolka Gedo ay sii sababtay xiisad ay dhaliso.
Waxa uu soo hadal qaaday inaysan kulmin Madaxweynaha dowlada federalka iyo Madaxda maamul goboleedyada muddo bilooyin ah,waxana uu xusay in loo baahan yahay in ay dowlada federalka iyo dowlad goboleedyada khilaafaadka ka dhex jira wadahadal lagu xaliyo.